သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး#241318 | Featuring
Home › သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် › ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး
သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး
Published at October 20, 2014
by Ko Kyaw OoDuration: 03:28
Downloading သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူးmp3 on this site is just for review purpose. If you love the song, please support the artists by buying the original CD/Cassette or buying the song from iTunes.
မူ ရ င်းသီ ချ င်း- Paul Slade - Friend (1982) http://www.youtube.com/watch?v=lOifnEB6uXc
သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူးတို့ အ ခ င် ဆုံးသူ င ယ် ချ င်းင ယ်ရေ
အ တူ ရှိ ထား တဲ့ ခ င် မ င် ခြ င်းေ တွ တို့ နှ စ်ယောက် လုံးသိ နား လ ည်နေ
ဖြူ ဖြူ စ င် စ င်နေ ထို င် ခဲ့ လ ည်းေ လ မ င်းကို ချ စ်နေ မိ ပြီမေ
အ ခွ င့် အရေးေ လးယူ နို င် ရ က် သူ မ င်းထ င် သွား မှာစိုးရိ မ်နေ အခြေ အနေ ဘ ယ် လို ကြို မ မြ င် နို င် ဘူးေ လ န ယ် ကျွံ ချ င်နေ တဲ့ အ ချ စ် ကလေးေ တွ
ေ မျှာ် လ င့် ခြ င်းတံ ခါးမှာေ စာင့် စားနေ တ ည် ငြိ မ်အောင်နေ ထို င်နေ ရ င်း
ေ ပျာ် ကာေ န မ ယ် သူ င ယ် ချ င်းေ တာ် ရာေ န ရာေ ဟာင်းေ လးမှာေ လ န ယ် ကျွံ ချ င်နေ တဲ့ အ ချ စ် ကလေးေ တွ
ေ ပျာ် ကာေ န မ ယ် သူ င ယ် ချ င်းေ တာ် ရာေ န ရာေ ဟာင်းေ လးမှာေ လ တို့ နှ စ်ယောက် ကြား မှာစ ည်းအ ဖြူရောင် အ လို လို တား ပြီးေ န ပြီပေါ့လေ စိုးရိ မ် အ မှ တ် ကို တို့ မကျော် နို င် ဟ န်ဆောင် က န့် လ န့် ကာအမှောင် ရဲ့ တ စ် ဖ က် ခြ မ်းမှာတို့ ရ င် ထဲ မှာငြိ တွ ယ်နေ ခ င် မ င် မှု နဲ့ ဖြူ စ င် မှုတွေ တို့ မ ဖျ က် ဆီးဝံ့ ဘူးင ယ်ရေ
ဟ န်ဆောင်နေ ထို င်နေ မ ယ် ကာလ ရှ ည် န ယ် ကျွံ ချ င်နေ တဲ့ အ ချ စ် ကလေးေ တွ
ေ ပျာ် ကာေ န မ ယ် သူ င ယ် ချ င်းေ တာ် ရာေ န ရာေ ဟာင်းေ လးမှာေ လ ကို ယ် သီ ဆိုနေ တဲ့ ဒီ သီ ချ င်းကို သူ င ယ် ချ င်းနား ဆ င် ခံ စားလေ သူပျော် ပါစေ ရ ည် ရွ ယ် ရ င်းကို ယ်ပျော် ချ င် ပြီ သူ င ယ် ချ င်းေ စ တ နာအ မှ န် ကို မ င်းသိ ပါစေ
Watch video on Youtube: သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး
Search another results: သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး
Post related to သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - ညီ ညီ သွ င် ၊ တူးတူး:
[03:02] သူ င ယ် ချ င်းအ တွ က် - မ ဒီBy Ko Kyaw Ooမူ ရ င်းသီ ချ င်း- Paul Slade - Friend ( ...
[06:03] ဂုဏ်ကြီးရှင် - သုမောင်By snuomwoaniဂုဏ်ကြီးရှင် - သုမောင် ...
[05:59] မောင့် မျက် ရည် ဝိုင်း စိုးလွင် လွင်By Myanmar Songsစိုးလွင် လွင်
ကာ ရန် သစ်
[04:24] က မ္ဘာေ မြ အ တွ က် -ဆောင်းဦးလှို င် ၊ စ ည် သူ လွ င် ၊အေးချ မ်းေ မBy Ko Kyaw Ooက မ္ဘာေ မြ အ တွ က်
ေ ဆာင်း� ...
[03:00] အ မှ တ် တ ရလေးများ-ဒေါ မ န စ် ၊ ဘို ဘိုBy Ko Kyaw Ooအ မှ တ် တ ရလေးများ-ဒေါ မ � ...
[03:15] အ ချွဲ မလေး-ဇော် ဝ င်းထွ ဋ်By Ko Kyaw Ooမူ ရ င်းသီ ချ င်း- Beautiful Sunday- Dan ...
Wlx Travel Freestyle IKing Kloak Bubble PipeSeth Condrey AvalanchaShohruhhonni HaydashdiHockey DadTop 10 Musicas Internacionais Mais Tocadas Nas Rádios Janeiro Fevereiro 2016 1Will Makeup Come Off LpsPpapIris The Goo Goo DollsDedede BattleTop 20 Dark Fantasy Anime Hay Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua Phần 1 HdNoor Mastana New Japani Song 2016نور مستانه نوی جاپانی غزلMpd직캠 에이핑크 손나은 직캠 내가 설렐 수 있게 Apink Son Na Eun Only One Fancam 엠카운트다운 161006How To Track Wrong Call NumbersHow To Quick Nerf Speedswarm Mod Guide Voltage UpgradeTop 100 Songs Glee All SeasonsHow To Change Your Settings On SnapchatSlash Fakke JadooeeCyrenic Crash KillDie Prinzen Alles Nur Geklaut Official Video